XOG: Madaxda Dowladda, Dowlad Goboleedyada & Midowga Musharixiinta oo kulan yeelanaya - Awdinle Online
XOG: Madaxda Dowladda, Dowlad Goboleedyada & Midowga Musharixiinta oo kulan yeelanaya
Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal ayaa waxaa la filayaa in todobaadka soo socda uu shirweyne uga furmo Madaxda Dowladda Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada ,Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha & Ururada Bulshada Rayidka.
Kulanka ayaa waxaa fududeynaya Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage, waxaana uu yahay mid lagu dhex-dhexaadinayo, Dowladda federaalka, Midowga musharixiinta Madaxweynaha & dowlad goboleedyada qaar oo isku khilaafsan Arrimaha doorashooyinka.
Kulanka sida aan wararka ku helnay ayaa waxaa uu dhacayaa 28 bishaan, waxana kulanka ka qeyb-galkiisa aqbalay Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug, waxaana kulanka goobjoog ka noqon doona 14-ka Xubnood ee Midowga Musharixiinta Madaxweynaha.
Qaar kamid ah Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa in ka hor Isniinta Todobaadka soo socda inay tagaan Magaalada Garoowe, waxana qodobada shirka looga hadi doono kamid noqonaya.
1: Doorashada 2021
2: Xasilinta Dalka (Amni ahaan)
3: Dhammeystirka Dastuurka qabyada ah.
4: Qabashada Doorasho Qof iyo Cod ah 2025
5: Yagleelidda Nidaam Federaal ah oo Shaqeynaya
Shalay waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Xubnaha Midowga musharixiinta Madaxweynaha & Ururada Bulshada rayidka, waxaana madaxda Ururada ay musharixiinta ka dalbadeen in la dhex-dhexaadiyo, iyaga & Madaxda dowladda ayna aqbaleen.
Previous articleBaarlamaanka Hir-Shabeelle oo kordhiyay muddo xileedka Madaxweynaha & Baarlamanka
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo xukuntay Nin doonayay in uu is qarxiyo+ Sawirro